Tilmaamaha Gawaarida Apple ayaa lagu wadaa in lagu daro U1 Ultra Wideband taageerada sanadkan | Waxaan ka socdaa mac
Tilmaamaha Gawaarida Apple ayaa loo qoondeeyay inuu ku daro U1 Ultra Wideband taageerada sanadkan
Sanadkii hore WWDC, Apple waxay soo bandhigtay aalad cusub oo furaha baabuurta. Muuqaalka ayaa u oggolaanaya darawallada inay ku beddelaan furayaashooda jirka gawaarida qaar ka mid ah aaladaha Apple sida Apple Watch ama iPhone. Cusbooneysiin ku saabsan faahfaahinta sii deynta furaha dijitaalka ah ee soo socda dabayaaqada sanadkan ayaa ku dari doonta taageerada Ultra Wideband isku xirnaanta. Sidoo kale Bluetooth Low Energy.
Cusboonaysiinta cusub ayaa ahayd ku dhawaaqay waxaa iska leh shirkadda isku xirnaanta Gawaarida, oo ay Apple xubin ka tahay. Qeexitaanka Digital Key 3.0 waxaa heli doona Apple iyo xubnaha kale ee dalada bartamaha sanadkan. Apple, tan macnaheedu waa inay awood u yeelan doonto inay cusbooneysiiso shaqada furaha gaariga oo leh taageero loogu talagalay Ultra Wideband U1 chip. Dalladda Xiriirinta Baabuurta ayaa leh tan ayaa u oggolaan doonta aaladaha in ay sameeyaan cabbiraado fog oo "ammaan ah oo sax ah" si loogu furo gaariga isticmaalaha.
Siidaynta Furaha Dijitaalka ah 3.0 waxay wax ka qabaneysaa amniga iyo adeegsiga iyadoo lagu xaqiijinayo furaha dhijitaalka ah ee u dhexeeya gaariga iyo aaladda moobaylka iyadoo loo marayo Bluetooth Low Energy. Kadib sameysasho kulan badbaado leh UWB, kaas oo u oggolaanaya gaariga in uu qaato cabbiro masaafo ah ammaan ah oo sax ah si loo helo aaladda gacanta.
Qalabka moobiilku wuxuu abuuraa oo ku kaydiyaa furayaasha dhijitaalka ah walxaha aaminka ah ee bixiya heerka ugu sarreeya ee ka-hortagga weerarrada qalabka ama barnaamijyada ku saleysan barnaamijka. Isweydaarsiga UWB wuxuu kaloo abuuraa cabbiraadaha loo yaqaan 'cryptographic parameters'. Tani waxay damaanad qaadeysaa amniga ugu badan ee lagu heli karo aaladda gaariga, sidaas darteed, ruqsad u siiso adeegsadaha inuu gaariga galo iyo inuu wado.
Iskaashatada Isku xirnaanta Gawaarida ayaa sidoo kale xustay in 'qeexitaankan cusub uu macaamiisha u oggolaan doono inay adeegsadaan qalabka gacanta oo ah furaha dhijitaalka ah ee aan gacmaha lahayn«. BMW waxay horey u shaacisay qorshayaal ay ku dhexgaleyso Ultra Wideband taageerada barnaamijkeeda Yurub dabayaaqada sanadkaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Tilmaamaha Gawaarida Apple ayaa loo qoondeeyay inuu ku daro U1 Ultra Wideband taageerada sanadkan
Apple TV 4K ee 2017 wuxuu joojiyaa iibinta laakiin jiilkii 4aad ee Apple TV ayaa sii jira
Qiimaha iyo astaamaha iPad Pro cusub